बेहुला विवाहको नाच,गानमा ब्यस्त बेहुली अर्कै संग टाप……! | समाचार
September 20, 2021 NepstokLeaveaComment on बेहुला विवाहको नाच,गानमा ब्यस्त बेहुली अर्कै संग टाप……!
उनी त्यही रात अर्कै केटासँग भागेपछि बबाल भएको हो।भारत उत्तर प्रदेशको चौबेपुर स्थानीय बजार निवासी एक युवती बिहे गर्नुअगाडि आफ्ना प्रेमीको साथ भागेकी हुन् ।कुरा शनिबार रातीको हो । प्राप्त जानकारी अनुसार आइतबार युवतीको बिहे तय भएको थियो । परिवारले बिहेको सबै तयारी पुरा गरेको थियो ।
बिहेको एक रात पहिले बेहुलीले जे गरिन्, त्यसले सबैलाई हैरान बनाएको छ ।उनले यतिसम्म जुक्ति लगाईन् की बिबाह गरेको रात समेत बेहुलाले एकसाथ समय बिताउन पाएन ।
बाँकी केवल मुक्तिगञ्ज जौनपुरबाट जन्ती आइपुग्न मात्र बाँकी थियो । फरार युवतीका परिवारका सदस्यहरू शनिबार राति विवाह समारोहमा व्यस्त थिए । राती अबेर, विवाह समारोह पछि, परिवार खाना खाए पछि निदाए ।त्यसपछि राति करिब दुई बजे केटीले अर्कै केटासँग बिहे गर्दिन लागेको कुरा थाहा पाएर आफ्नो प्रेमीसँग फरार भएकी हुन् ।
त्यसपछि फरार युवतीका परिवारका सदस्य बिहान चौबेपुर प्रहरी चौकी पुग्नुपर्यो । बिहान चौबेपुर प्रहरी चौकी पुग्दा फरार युवतीका आफन्तले प्रहरी चौकीमा हंगामा पनि गरेको बताइएको छ ।हल्लापछि, प्रहरी टोली पनि काममा लाग्यो । त्यसपछि प्रहरी टोलीले कान्जाद बस्तीबाट धेरै युवालाई पक्राउ गर्यो । हाल प्रहरीले ती युवालाई हिरासतमा लिएर सोधपुछ गरिरहेको छ ।
उनीहरु भागेर कहाँ पुगे भन्ने कुराको कुनै जानकारी छैन । तर घ,टना यति रोचक भयो की । उज्यालो हुन केही घण्टा मात्र बाँकी थियो ।बिहे घरमा आफन्तहरु रात्रि समयमा नाचगान गरिरहेका थिए । विवाहको खुबै रौनक थियो । बिहानै जन्ती आउने भएकाले भोजको पूर्ण तयारी थियो । तर त्यही मौकामा बेहुली प्रेमीसँग भागिदिइन् । गाउँनै चर्चामा आयो ।
२२ वर्षका युवकको प्रहरीलाई छक्क पार्ने चोरी धन्दा, बैंकमा छ डलर खाता : दिनको ९ हजार तिरेर तारे होटलमा बनाउँथे चोरीको योजना